Saldhigga Ciidanka AMISOM Ee Deegaanka Biyaha Cadde Gobolka Sh/dhexe oo Weerar Xooggan lagu Qaaday.
Tuesday June 13, 2017 - 12:06:07 in Wararka by Super Admin
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa weeraro culus ku qaaday sadhig ciidamada Burundi ay uga suganyihiin gobolka shabeelaha dhexe.
Wararka ka imaanaya deegaanka Biya Cadde ee duleedka Bari magaalada Mahadaay ayaa sheegaya in dagaallo culus xalay saqdii dhexe ay ku dhaxmareen ciidamada Xarakada SHM iyo ciidamada soo duulayaasha Burundi.
Weerarka oo ku bilaawday duqeyn madaafiic loo adeegsaday waxaa xigay dagaallo fool ka fool ah oo dhaxmaray ciidamada Burundi iyo maleeshiyaadka DF-ka oo isku dhanac ah iyo ciidamada Al Shabaab oo weerarka soo qaaday.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka oo muddo saacad iyo bar ah socday uu sababay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah, jugta madaafiicda iyo rasaas lays dhaafsanayay ayaa laga maqlayay gudaha iyo hareeraha deegaanka Biya Cadde.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaarado ay kusoo degeen Biya Cadde ayna halkaasi ka daad gureeyay Meydad iyo dhaawacyo ka dhashay dagaalkii xalay.